Umkhiqizi Nomhlinzeki Womhlangano Wokushisela waseChina | ZHJ
Singenisa umshini wokushisela we-B-5000 kusuka kwa-Bihler eJalimane, singakwazi ukuhlanganisa ama-200-300pcs ngemizuzu.
Izinqubo ezimbili eziyisisekelo zisetshenziswa ekuhlanganiseni insimbi Ngesikhathi sokushisela izingcezu zokuxhumana izinto zokuxhumana zinamathiselwe kusuka kumaphrofayili (amateyipu), izingxenye zezintambo noma ngefomu lethiphu. Ubukhulu bendawo yokuxhumana yokushisela ngezinga eliphezulu ngenkathi kugcinwa ukubekezelelana okusondele kokukhiqiza kungu-5 x 5 mm².
Ngokuya ngezinto zokuxhumana ezisetshenzisiwe ezisuselwa kwigolide, i-palladium noma isiliva. Ukuze usebenzise inqubo yokwenziwa enokwethenjelwa futhi eyonga kakhulu izinto zokuxhumana zivame ukusekelwa kalula.
Strip uncoiling-strip leveling-Pre punching-Coin and weld-Final isibhakela
300-450pcs / iminithi
Ag 、 AgNi 、 AgCu 、 AgFe, njll.
Imininingwane ububanzi ububanzi wire
Ukuphakama koxhumana naye
Umugqa wokushisela we-Longitudinal≥Xhumana nobubanzi bocingo, l Umugqa wokushisela ojikelezayo
Izingxenye ezinesitembu ezinemichilo yokuxhumana eqediwe
Izingxenye ezinesitampu ezisuka kumugqa wokuqedana oqediwe zikhiqizwa ngokwezomnotho kusuka emgqeni oqhubekayo. Izinto zokuxhumana ezikhiqizwa ezindaweni zethu zokugaya zisekelwe kwigolide, i-palladium nesiliva. Ama-alloys ethusi nethusi zisetshenziswa njengezinto zokuphatha eziyisisekelo.
Izicelo eziningi zokuxhumana zidinga izingqimba zensimbi eziyigugu ezijiyile. Lokhu akukwazi ukusetshenziswa kuma-substrates ngokwezomnotho ngezinqubo ze-electroplating. Ngaphezu kwalokho izinto zokuxhumana ezinezakhiwo ezithile zomzimba nezomshini ngokuvamile ziyadingeka. Lezi zinto ezivela kuma-alloys egolide-palladium noma ngokususelwa kusiliva zenziwa yi-alloy melting noma i-powder metallurgy. Inhlanganisela yokuxhumana nezinto zesisisekelo kutholakala ngokufaka izinqubo ezifana nokubopha okubandayo noma ukugoqa okushisayo.
Izingxenye ezinesitembu kusuka kumaphrofayili we-Toplay
I-DODUCO ikhiqiza ama-bimetals wokuthintana ngefomu lokuqhafaza ngokubopha imicu emise okwe-flator ezintweni ezithwala okulandelwa ukugoqeka kwephrofayili. Lezi yizisekelo zezingxenye zokuxhumana ezicacisiwe zamakhasimende ezinezingxenye zensimbi eziphakanyisiwe zezicelo ezifuna kakhulu.
Izingxenye ezinesitampu kusuka emapheshana e-seam-ashiselwe
Inzuzo enkulu yempahla yomugqa e-seam-welding yokukhiqiza izitembu zokuxhumana yindawo elinganiselwe yendawo ye-weld. Lokhu kubangela ukuthamba kwezinto zasentwasahlobo eziqinile zensimbi kuphela endaweni eyenziwe ngokushesha ye-weld. Izendlalelo zokuxhumana ziqukethe ikakhulu izinto zokuxhumana eziqinile noma amaphrofayli wokuxhumana ohlanganisiwe noma i-weld.
Langaphambilini Ukuvuselela Umhlangano
Olandelayo: Oxhumana nabo benkinobho yokushisela
Xhumana nama-Assemblies we-AC Contactor
Xhumana nama-Assemblies we-MCCB